यद्यपि फ्रान्सेली क्रान्ति सामान्यतया 1790 मा एस्टेट्स जनरलको कार्यवाहीको साथ शुरु भएको छ, फ्रान्सको एक शहरले पहिलेको सुरुवात गर्ने दावी गर्दछ: 1788 मा टाइलका दिनको साथ।
पृष्ठभूमि: पर्वतारोहण आक्रमण अन्तर्गत
अठारहौं शताब्दीको सताब्दीमा फ्रान्समा रहेका विभिन्न तहका विभिन्न न्यायिक र सरकारी शक्तिका साथ त्यहाँ 'पार्लेन्ट्स' छन्। तिनीहरू आफैलाई शाही निराशावाद विरुद्ध विनाशको रूपमा सोच्न चाहन्थे, यद्यपि व्यवहारमा तिनीहरू राजाको रूपमा पुरातन शासनको एक अंश थिए।
यद्यपि फ्रान्ससँग सम्बन्धित वित्तीय संकटले गर्दा, र सरकारको विनाशको कारणले गर्दा उनीहरूको मौद्रिक सुधारहरू स्वीकृत भएका थिए, त्यस्ता विरोधहरूले विरोधाभासलाई पराजित गरेका थिए।
सरकारले यस बाधाको वरिपरि अलिकति पराजित गर्न को लागी पराजित गर्न को लागी बृद्धि को शक्ति को बहाव गरेर उनलाई इकट्ठा गर्न को लागी मध्यस्थता को प्यानलहरुलाई कम गरेर। फ्रान्स भरमा, सम्पत्तीहरूले यी नियमहरू गैरकानूनी रूपमा भेटे र अस्वीकार गरे।
ग्रेनोबल मा तनाव तनाव
Grenoble, Dauphiné को संकल्प कुनै अपवाद थिएन, र तिनीहरूले कानून 20 मई, 1788 मा अवैध रूपमा घोषित गरे। Parlement को मजिस्ट्रेटहरूले महसुस गरे कि उनीहरूले शहरी कर्मचारीको ठूलो समूहलाई समर्थन गरे जुन उनीहरूको शहरको स्थिति र संभावनाको लागि कुनै पनि चुनौती संग गुस्साएको थियो। तिनीहरूको स्थानीय आय। 30 मई को शाही सरकारले स्थानीय सेनालाई आदेश दिएका थिए कि मजिस्ट्रेटहरुलाई शहरबाट छुटाउन।
ड्यू डी डे डेरोमोन्ट-टोननेररको आदेश अनुसार दुई रेजिमेन्टहरू बहसिएका थिए, र जुन जुन जुन जुन जुन जुन जुनसुकै दिन आइपुगेका थिए ती शहरका भित्रका उत्तेजकहरूले हल्लाए। काम बन्द भयो, र गुस्सा भीडहरु को संसदीय अध्यक्ष को घर मा गए, जहां मजिस्ट्रेटहरु एकत्र गरे। अन्य भीडहरू शहरका ढोकाहरू बन्द गर्न र राज्यपाललाई तिनको घरमा सताउन थाले।
डकले सशस्त्र सैनिकहरूको अपेक्षाकृत सानो समूहमा पठाउँदा यी दंगाहरूसँग लडाइँ गर्ने निर्णय गरे, तर तिनीहरूका हतियारहरू आगो लगाउँदैनन्। दुर्भाग्यवश सेनाको लागि, यी समूहहरू भीडलाई सहन गर्न धेरै थोरै थिए, तर उनीहरूलाई तीव्र पार्न ठूलो थियो। धेरै आन्दोलनकारीहरू आफ्नो छतमा चढे र टेलिभिजनमा सवार भएर सहरमा आक्रमण गर्न थाले।
एक रेजिमेन्टले उनीहरूको अर्डरमा फसेका थिए, चोटको बावजुद, तर अर्कोले खोलेका आगोले हानिकारक बनायो लिखित अलार्म घण्टी बज्यो, शहर बाहिर बाहिर दंगाको लागि सहयोग पुर्याउन, र दबाब तीव्रतामा वृद्धि भयो। डक को एक समाधान को लागी धोखा दिए कि न नै एक नरसंहार थियो न त एक आत्मसमर्पण थियो उनले मजिस्ट्रेटहरु लाई उनको चीज शांत गर्न को लागि छोडने को लागि पूछा, तर उनि महसूस गरे कि उनिहरु छोडने देखि रोक्न को लागि। अन्ततः डकले पछाडि झिक्यो, र भीडले शहरलाई नियन्त्रणमा लिए। गवर्नरको घर लुटिएको रूपमा, मजिस्ट्रेटहरू शहर मार्फत परेका थिए र एक विशेष सत्रको मेजबानी गर्न आग्रह गरे। यी मजिस्ट्रेटहरू भीडमा नायक थिए, तिनीहरूको प्रतिक्रिया अक्सर तिनीहरूको नाममा अराजकतामा आतंकको डर थियो।
अर्डर बिस्तारै पुनर्स्थापित भएको थियो, पुरानो मजिस्ट्रेटहरू शहर र अरू ठाउँमा शान्तिको लागि भागेर गए।
तथापि, धेरै युवा सदस्यहरू बस्थे, र तिनीहरूले एक महत्त्वेपूर्ण दंगा राजनीतिक रूपमा बलियो बनाउन थाले। तेस्रो लागि सुधारिएको मतदान अधिकारको साथ सबै तीन सम्पत्तिहरूको एक विधान गठन गरिएको थियो, र अपील राजालाई पठाइयो। डक प्रतिस्थापित भयो, तर उनको उत्तराधिकारीले कुनै प्रभाव पारेको थिएन, र ग्रेनोबल बाहिरको घटनाहरूले उनीहरूलाई परास्त गरे, किनकि राजाले एस्टेट्स जनरललाई फोन गर्न बाध्य भएको थियो; फ्रांसीसी क्रांति चाँडै सुरु हुनेछ।
टाइल्सको दिनको महत्त्व
ग्रेनोबल, जसले शाही प्राधिकारीको पहिलो प्रमुख ब्रेकडाउन देखे, मोब्याक कार्य र फ्रांसीसी क्रांतिकारी अवधिको सैन्य विफलता ( छोटो / गहराईमा ), यसैले आफैले 'क्रांतिको पालना' भन्ने दाबी गरेका छन्। पछिको क्रांतिको धेरै थोरै विषयहरू र कार्यक्रमहरू टाइलहरूको दिनमा अग्रगामी थिए, जसबाट भीडहरू घटनाक्रम प्रतिनिधि निकायको निर्माण गर्न सबै वर्षको 'प्रारम्भिक' बनाउन थाले।
पुरुषहरू - मिश्रको पहिलो राजा
मोहनदास गांधी, महात्मा
6 रानी विक्टोरिया को बारे मा जानने को तथ्य
मार्क्स एरेलीस को जीवन र प्रतिबद्धता
गल्ती पत्ता लगाउनुहोस् - हालको सरल वा वर्तमान निरन्तर
अमेरिकामा 10 सस्तो मोटरसाइकलहरू उपलब्ध छन्
के Music Funky ले गर्छ?
कलामा "जोर" द्वारा कस्तो कुरा छ?
आवधिक तालिकामा सोडियम तत्व (ना वा परमाणु संख्या 11)
रासायनिक हिमपात पकाउनुहोस्
पावर जेट कार्बोचर
चीनका 23 प्रान्तहरू
शुरुआतीका लागि शीर्ष 10 संगीत उपकरण
Cetaceans - व्हेल, डल्फिन, र Porpoises
10 एक चीजलाई एक परम्परागत लैटिन मास भाग्नु अघि जान्न
ज्वलनशील, इन्फ्रामयोग्य, र गैरप्रवाहयोग्य
म एक्रिलिक पेंट को विभिन्न ब्रान्डहरु मिक्स गर्न सक्छु?
के म व्यवस्थापन डिग्री कमाउनुपर्छ?
अल ठीक छ
लोक संगीत र नागरिक अधिकार आंदोलन
5 परजीवीहरूले पशुहरूलाई लाशमा घुमाउनुहुन्छ
2010 मा आतंकवाद को संयोजन
प्रत्येक यू.एस. बिलमा अनुहारहरू
के धार्मिक विश्वासहरूको समान असाधारण विश्वासहरू छन्?
फ्रांसीसी अनुसन्धानकर्ता कसरी प्रयोग गर्ने 'क्यूई' र 'क्यू'